बाबुआमा छँदै छोराछोरी टुहुरा ! – Chitwan Post
बाबुआमा छँदै छोराछोरी टुहुरा !
हाम्रा छोराछोरी असल बनून्, राम्रा बनून्, सुसंस्कृत बनून्, सभ्य र भव्य बनून् भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ । हामीले गरेका अधिकांश दुःख, दौडधूप र प्रयत्नहरु यिनै छोराछोरीका लागि केन्द्रित छन् । पैसा, प्रतिष्ठा, प्रगति जे भए पनि आखिर यिनै सन्तानका लागि हुन् भन्ने मनोविज्ञानका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ । यसरी आफ्नै सन्तानका लागि मरिमेटी काम गरिरहँदा पनि बालबालिकाचाहिँ हामीले सोचेजस्ता बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासोले भने हामीलाई कहिल्यै छोड्ने भएन ।
बालबालिकाका लागि अभिभावकका तर्पmबाट हुनुपर्ने आवश्यक पहल, जानकारी र जिम्मेवारीका बारेमा हामीले यसअघि पनि मन्थन गरेका छौँ र धेरै विषयसन्दर्भहरुबारे चर्चा गरेका छौँ । सबै मानिसले सोचेका, आशा गरेका सबै कुरा शतप्रतिशत पूरा नै हुन्छन् भन्ने छैन । हाम्रा छोराछोरीको पढाइलेखाइ, विकास—विस्तार र सन्तुष्टिका लागि सक्दो प्रयास गरौँ र विस्तारै उनीहरुमा आशातीत परिवर्तन देखिने छ भनेर आशावादी बन्न पनि नछोडौँ ।
प्राचीन गुरूकुलका धेरै सन्दर्भहरु सम्झँदा आनन्द लाग्छ । बालकहरु गुरूकहाँ जान्थे र गुरूकुलमा छात्रहरुका लागि बनेका छात्रावासमा बस्थे । व्रतबन्धको संस्कार सम्पन्न भएपछि घर छोडेर गुरूकुलमा गएका उनीहरु कहिल्यै दुःखी हुँदैनथे । गुरूकुलको छात्रावासको जीवन आजको जस्तो सजिलो पनि थिएन । गुरूका गोठमा टन्न गाईहरु हुन्थे । पढाइ र स्वाध्ययनका अतिरिक्ति तिनको स्याहारसुसार, कृषिकर्ममा सहयोग, गुरूगुरूआमाको सेवालगायत विभिन्न कामहरु गर्नुपर्दा पनि कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैनथ्यो, तिनलाई । त्यसमाथि कठोर अनुशासनको पालना गर्नुपर्दथ्यो ।
आज हामीले पनि हाम्रा बालबालिकालाई छात्रावास अर्थात् होस्टेलमा पठाउँछौँ, राम्ररी पढून् भनेर तर त्यसरी हामीले बालबच्चा पढ्न पठाएका छात्रावासहरुको जीवन कस्तो छ, त्यो भने साँच्चै नै चिन्तनीय विषय हो । हामीकहाँ पहिलेजस्तै शिक्षणलाई आदर्श मान्ने व्यक्ति गुरूका रुपमा शिक्षण पेसामा अत्यन्त कम छिरेका छन् । कतै कुनै काम नपाएपछि वा नदेखेपछि पढाउने काममा लागेका शिक्षकहरुको सङ्ख्या धेरै छ । आदर्श भन्ने शब्द सुन्नै नचाहने मानिसहरु शिक्षक भएका छन्, विद्यालय खोलेका छन् र व्यापारका नाममा होस्टेल चलाएका छन् । आज हाम्रा वरपर खोलिएका प्रायः सबै छात्रावास पैसालाई उद्देश्य बनाएर खोलिएका छन् ।
बालबालिका हाम्रै घरमा हुन्छन् । बिहान ब्यँुझिएपछि विद्यालय नजाँदासम्मका करिब ३ देखि ४ घन्टाको समय हाम्रा छोराछोरीले पढ्ने समय हो, गृहकार्य गर्ने समय हो । उनीहरुले यसबीचमा स्वाध्ययन गर्ने, विद्यालयको पाठलाई दोहो¥याउने र आवश्यक तयारी गर्ने समय हो । विद्यालय गइसकेपछि ६ घन्टा विभिन्न विषयहरुको अध्ययन गर्दछन् । विभिन्न विषयशिक्षकहरुले पढाएका कुरालाई बुझ्ने, प्रश्न गर्ने, स्पष्ट हुने र कक्षा—क्रियाकलापमा सहभागी हुने काम विद्यालयमा हुन्छ । विद्यालयबाट आउँदा कम्तीमा ३ घन्टाका लागि घरमै गर्नुपर्ने गृहकार्य पनि तिनले लिएर आएका हुन्छन् ।
घरमा आइसकेपछि सरसफाइ गरिवरी खाजाभुजा खाएर पढ्ने बस्ने विद्यार्थीले ७ वटा विषयलाई आधाआधा घन्टा दिएर पढ्न वा गृहकार्य गर्न बस्दा पनि साढे तीन घन्टा लाग्छ । घरमा कहिलेकाहीँ सघाउने बानी छ भने उनीहरुको केही समय त्यसमा पनि खर्च हुन्छ । त्यसपछि खानपानमा ध्यान दिँदादिँदै सुत्ने बेला हुन्छ । बढीमा १० बजेभित्र बालबालिकालाई सुताइसक्नुपर्दछ ।
यसरी हेर्दा, घर र विद्यालयका काम र गतिविधि हेर्दा हाम्रा बाबुनानीलाई कहिल्यै फुर्सद हुँदैन । उनीहरु कुनै न कुनै तरिकाले व्यस्त भइरहनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयको गृहकार्य गर्नका लागि घरभन्दा सुन्दर ठाउँ अर्को हुँदैन । विद्यालयमा सिकाइएको कुरा जबसम्म बच्चाले घरमा अभ्यास गर्दैन, अध्ययन गर्दैन र तयारी गर्दैन, यसको पढाइ उत्कृष्ट कहिल्यै हुँदैन ।
आज प्रायः होस्टेलमा विद्यालयको गृहकार्य गराउने काममात्रै हुन्छ । बालबालिका दिनभरि विद्यालयमा पढेर आएकै हुन्छन् । बिहान घरमा पनि पढ्ने नै काम हो । बेलुका पनि आएर घरमा पढ्नैपर्छ, अनि होस्टेलमा किन पठाउने ? होस्टेलमा राखेका बालबालिकाले कहिल्यै अभिभावकलाई धन्यवाद दिएका हुँदैनन्, बरू भित्रभित्रै गाली गरिरहेका हुन्छन् । तिनले बाबुआमाले हामीलाई माया गर्नुभन्दा पनि आफूबाट पन्छाउन खोजिरहेका छन् भन्ने ठान्छन् । हामी प्रायः अभिभावकले समय नभएका नाममा, हेर्न नभ्याएको नाममा, सभ्य र भव्य भएको आडम्बर देखाउने नाममा, बाबुनानीको पढाइ राम्रो बनाउने नाममा वा जान्ने बनाउने नाममा, बालबालिकाको चकचकबाट मुक्त हुने नाममा होस्टेलमा पठाउने गरेका छौँ ।
होस्टेलमा पठाउँदा बालबालिकामा पढाइप्रति प्रेम होइन वितृष्णा पैदा हुन्छ, किनकि चौबिसै घन्टा पढाइ—पढाइ भनिरहँदा उनीहरु वाक्कदिक्क भएका हुन्छन् । आखिर पढाइकै बहानामा होस्टेलमा भर्ना गरिने भएकाले पढाइ भनेको त हामीले मनखुसीभन्दा पनि जबर्जस्ती पढ्ने विषय रहेछ र जतिखेर पनि पढिरहने विषय रहेछ भन्ने पर्दछ, जुन बिलकुल गलत हो ।
दोस्रो, होस्टेलमा पनि विद्यालयकै गृहकार्य गराइने भएपछि त्यो पनि व्यर्थ नै भयो, किनकि त्यो काम विनापैसा घरमै अभिभावकका साथमा बसेर बालबालिकाले पूरा गर्न सक्थे । यसले उनीहरुमा आपैmँले पढ्ने, खोज्ने, सिक्ने र अघि बढ्ने बानीको विकासमा समेत मद्दत पु¥याउँथ्यो, तर होस्टेलमा गएपछि उनीहरुमा पढ्न, लेख्न र काम गर्न कोही न कोही चाहिन्छ, म एक्लै केही गर्न सक्दिनँ भन्ने भावनाको विकास भएर जान्छ र बच्चा आत्मनिर्भर बन्न पाउँदैन ।
तेस्रो, विद्यालयको भन्दा होस्टेलको खर्च दोब्बर, तेब्बरभन्दा धेरै हुन्छ । विद्यालयमा मासिक ३ हजार तिर्न नखोज्ने, पैसा बाँकी राख्ने, तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि होस्टेलमा मासिक १० हजार तिर्न तयार हुन्छन् । यसले एकातिर विद्यालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर धेरै पैसा खर्च गरेर भए पनि बच्चालाई अन्तै लखेट्नुपर्छ भन्ने व्यवहारलाई पुष्टि गरेको छ ।
चौँथो, होस्टेलप्रतिको आकर्षण भनेको विद्यालयको नियमित पढाइलेखाइका गतिविधिप्रति वितृष्णा हो । हामीकहाँ विद्यालयको पढाइ घरको खाजाजस्तो भएको छ भने होस्टेलको पढाइ चाउचाउजस्तो भएको छ । घरमा आमाले बनाएको खाना र खाजा मीठो नहुने, खान मन नलाग्ने, तर दोकानको चाउचाउतिर तानिन मन लाग्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यस्तै विद्यालयमा शिक्षकशिक्षिकाले पढाएको पढ्न नखोज्ने, ध्यान नदिने, होहल्ला गर्ने, जिस्किएर बस्ने र पढ्ने भनेको होस्टेलमै हो भन्ने मानसिकता बनाउने प्रवृत्ति छ । चिसो भनेकै कोकाकोला भनेजस्तै ‘पढाइ भनेकै होस्टेलको’ भन्ने भ्रमलाई सत्य बनाउन खोजिएको छ ।
पाँचौँ, होस्टेल जति धेरै खुल्छन् र विद्यार्थी त्यता जान्छन् उति नै विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ, किनकि शिक्षकहरुले पनि कक्षाकोठामा राम्ररी पढाउँदैनन् । आज यस्तै भएको त छ । शिक्षकले कक्षाकोठामा चाहिँ ध्यान नदिने, राम्ररी नपढाउने, स्टाफरूममा गफ चुटेर बस्ने, कक्षाकोठामा गएर निदाउने ! विद्यार्थीलाई खुलेआम मेरो होस्टेलमा आऊ, म राम्ररी पढाउँछु भन्ने शिक्षकहरु कति छन् कति !
छैटौँ, होस्टेलको खाना प्रायः हाइजेनिक हुँदैन । आखिर व्यापार नै त हो ! स्तरीय खाजा र खाना खुवाउनुभन्दा धेरैलाई एकैपटक कस्तो खुवाउने हो त्यस्तै किसिमको व्यापारिक भोजन वा आहार तयार पारिन्छ, जुन घरमा खुवाइने खाना वा नास्ताभन्दा फरक हुन्छ । हामीले होस्टेलको खानाले बिरामी भएका बालबालिकाका समाचार कति सुनेका छौँ कति ! मीठो, स्वस्थ र ताजा खानेकुराभन्दा बजारिया तयारी खाजा, खाना, मैदाबाट बनाइएका परिकारको प्रयोग अधिक गरिने हुनाले पनि बालबालिकाले स्तरीय खानेकुरा पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
यसको अर्थ, होस्टेल सम्पूर्णरुपमा गलत पनि होइन । यदाकदा अलि धेरै नै समस्याग्रस्त बच्चा छ भने वा उसलाई थप शिक्षण र पृथक् मार्गदर्शन एवम् परामर्शको आवश्यकता छ भने त्यतिखेर केही समयका लागि होस्टेलमा राख्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै विशेष परीक्षाको समय आयो, उनीहरुले थप १–२ महिना अभ्यास गर्नुप¥यो र स्तरीय स्याहार र मार्गदर्शन चाहियो भने त्यतिबेला पनि केही कालका लागि होस्टेल उपयोगी हुन सक्छ ।
हाम्रो पढाइ यति महँगो भएको छ कि के कुरा गर्ने ? निजी विद्यालयमा त पहिले पहिले परीक्षाको १–२ महिनाअघि विशेषगरी कक्षा १० का बालबालिकालाई होस्टेलमा राखी पढाउने गरिन्थ्यो, तर आजभोलि त वैशाखको सुरूआतदेखि ने होस्टेलमा राखेर पढाउने परम्पराको विकास भएको छ । अभिभावकले एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बालबालिकाको पढाइलेखाइका नाममा गरिएको व्यर्थ व्यय हो । दिउँसो विद्यालयमा पढाइने पढाइ अर्थात् नियमित कक्षाहरुमा प्रभावकारी सहभागी हुने र सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुनका लागि आफ्ना बालबालिकालाई प्रेरित गरियो भने त्यसरी विद्यालयमा पढेका कुरालाई घरमै अभ्यास र पुनरावृत्ति गर्ने विद्यार्थी कहिल्यै पनि होस्टेलमा बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
हिजोआज इमेल–इन्टरनेटको प्रयोग, खानपान र रहनसहनमा आएको परिवर्तनले पनि बालबालिका गलत बाटोमा लाग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । दिनरात विभिन्न संस्कार भएका साथीसँगीसित हिमचिम गर्दा वा समय बिताउँदा बालबालिका हामीले आशा गरेजस्तो वातावरण पाएर हृुर्कन वा सिक्न पाउँदैनन् कि भन्ने संशय पनि यथावत् छँदैछ ।
सकेसम्म बालबालिकाले घर छोड्न चाहँदैनन् । ठूला भएपछि त तिनले घर नछोडी हुँदैन, तर सानैमा घर छोडेर, बाबाआमासित अलग्गिएर बस्नुपर्दा अधिक पीडाको महसुस हुन्छ, तिनलाई । विशेषगरी, कठोर अनुशासन भएका विद्यालयका होस्टेलमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा आत्तिएर भागेका वा संवेगात्मक दृष्टिले बिग्रिएका बालबालिकाका बारेमा पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ ।
यसर्थ, बालबालिकालाई सकेसम्म होस्टेलमा नराख्नु नै उत्तम मानिन्छ । घरकै खाना खाएर विद्यालय जाने, विद्यालयमा गएर राम्ररी पढ्ने, विद्यालयमा पढेका कुरालाई घरमा आएर अभ्यास गर्ने, गृहकार्य राम्ररी गर्ने, स्वाध्ययनमा जोड दिने, नबुुझेका कुरा विद्यालयमा गएर शिक्षकशिक्षिकासित सोध्ने र स्पष्ट भई अघि बढ्ने गर्नुभन्दा सुन्दर विकल्प अर्को देखिँदैन ।
छोराछोरी छोडेर बाबुआमा विदेश !
एकथरी अभिभावकबाट अत्यन्त व्यस्त भएको नाममा बालबालिकालाई होस्टेलमा भर्ना गरेर पैसाबाहेक सम्पूर्ण दायित्वबाट पन्छिने काम भएको छ भने अर्काथरी अभिभावकबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा बालबालिकालाई होस्टेलको जिम्मा लगाएर आपूm पन्छिने काम भएको छ । छोराछोरीलाई आफ्ना बूढा बाबुआमाको जिम्मा लगाएर पैसा कमाउने बहानामा विदेशिने छोराबुहारीको कथा कति देख्न र सुन्न पाइन्छ । साना–साना कलिला बालबालिकाका लागि तिनका बाबुआमाभन्दा ठूला र प्रिय कोही हुँदैनन् । तर, आज तिनका बाबुआमा पनि पैसा, मोज र मस्तीका कारण यति कठोर भएका छन् कि तिनलाई छोराछोरीको कत्ति पनि चिन्ता छैन ।
तपाईंले पैसा कमाउन चाहनुहुन्थ्यो, विदेश घुम्न, मोजमस्ती गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने बच्चा नजन्माउनुभएकै भए उत्तम हुन्थ्यो । तपाईंले विदेश र पैसाको रहर पूरा भइसकेपछि बच्चा जन्माएर आरामसित तिनलाई स्याहार र रेखदेख गर्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो । यो क्रम निकै बढेर गएको छ । कति बच्चाबच्चीले त बाबुआमा भन्ने नै बिर्सिसकेका छन् । तिनले हुजुरबा, हजुरआमालाई नै बाबाआमा भन्नु परेको छ ।
कति अभिभावक जापान, अस्टे«लिया, अमेरिकालगायत देशहरुबाट भिडियो कल गरेर आफ्ना छोराछोरीसित कुरा गर्न खोज्छन्, तर छोराछोरीले वास्तै गर्दैनन्, किनकि तिनले पनि त बेवास्ता गरेर गएका छन् । बाबुआमाभन्दा हजुरबा, हजुरआमा तिनका लागि प्रिय छन् । उता, बाबुआमा भने छोराछोरीले बिर्से भनेर उल्टै छोराछोरीलाई नै गाली गर्ने, नेपाल आउँदा पिट्नेसमेत गरेको दृश्य स्वयम् मैले देखेको छु ।
पैसाका नाममा वा विदेश मोहका नाममा आफ्ना छोराछोरीमाथिको योभन्दा ठूलो बर्बरता बाबुआमाको अर्को के हुन्छ ? यहाँ त कम्तीमा यी बालबालिका बाबुआमासित बस्न नपाए पनि हुजरबा, हजुरआमासित त बस्न पाएका छन्, तर कति यस्ता बालबालिका छन्, तिनलाई कुनै होस्टेलको जिम्मा लगाएर आफू विदेशिएका बाबुआमा पनि छन् । उनीहरुले उतैबाट चाहिँदो पैसा पठाउँछन्, खर्चको कुनै चिन्ता नगर्नू भन्छन्, तर यता छोराछोरीको अनुहारमा भने कतै पनि मुस्कान हुँदैन ।
देशको नाम चलेको विद्यालयको होस्टेलमा बालबालिका पढेका छन्, तिनका बाबुआमाले प्रशस्त पैसा पनि खर्च गरेका छन्, तर ती बाबुआमा आउँदा बालबालिकाको मनोविज्ञान, प्रवृत्ति, व्यवहार बदलिएको पाउँछन् । यस्ता बालबालिका भावनात्मकरुपले पनि कमजोर हुन्छन्, पढाइमा पछि पर्दछन् भने प्रतिस्पर्धाहरुमा अघि जान सक्दैनन् । उनीहरुमा पर्याप्त मात्रामा आत्मबलको पनि अभाव हुन्छ ।
उता, होस्टेल सञ्चालकहरुले पनि ‘भो, तपाईं दुवै जना विदेश जाने, तर बच्चालाई हामीले यहाँ हेर्ने गर्न सक्दैनौँ, अभिभावक साथमा हुनुपर्दछ’ भनेर भन्न सक्दैनन्, किनकि ती पैसाका गरिब छन्, तिनलाई कहिल्यै पनि पुग्दैन । पैसा पाएपछि जसो गर्न पनि तयार हुन्छन्, तिनलाई बालबालिकाको भविष्य, तिनको दुःख र पीडासित के मतलब !
हेर्नुस् त, हाम्रा बालबालिका हामी छँदाछँदै पनि कसरी टुहुरा भएका छन् ? कसरी हामीले तिनलाई हाम्रो उपस्थितिबाट वञ्चित तुल्याएका छौँ ? आजको दुर्दशा नै यही हो । बाबुआमा हुँदाहुँदै छोराछोरी टुहुरा भएर बाँच्नुपर्ने ! त्यो फेरि तिनकै नाममा ! ती विदेश गएका बाबुआमासित किन छोराछोरी छोडेर जोडी नै विदेश ? भनेर सोध्ने हो भने ‘के गर्ने सर ! यसो गरेको पनि त यिनकै लागि हो नि ! विदेशमा कति दुःख हुन्छ । छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस्, तिनलाई दुःख नहोस् भनेरै यिनलाई राम्रो र महँगो स्कुलमा भर्ना गरेर होस्टेलमा राखेर हामीले विदेशमा दुःख गरेका हौँ नि !’ तपाईंले यिनको भविष्यका लागि यसो गरिरहनुभएको छ, तर यिनको वर्तमान छियाछिया पारेर ! बालबालिका कम्तीमा १० वर्ष नहुँदै सानैमा तिनलाई अर्काको जिम्मा लगाएर हिँड्दा त्यसले कहिल्यै राम्रो नतिजा दिँदैन ।
जुन बेलामा माया र स्नेह पाउनुपर्ने हो, केयर पाउनुपर्ने हो, आवश्यक ढाडस र अभिभावकत्व पाउनुपर्ने हो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईं टाप्, तर पछि तिनले बिर्सिसकेपछि आएर सुनै दिनुस् न, त्यसको के अर्थ ? तसर्थ, हामीले बालबालिकालाई जन्माएरमात्रै हुँदैन हुर्काउनु, बढाउनु र आवश्यक सान्निध्य दिनुपर्दछ । बालबालिकालाई मातृपितृ सान्निध्यभन्दा ठूलो केही हुँदैन । हो, तपाईंले बालबालिकाकै लागि सोच्नुभएको छ, सबै थोक तिनकै लागि गर्नुभएको छ, तर ‘लगनपछिको पोते’को काम हुँदैन भनेभैmँ असमयको पैसा, प्रतिष्ठा र स्याहारको कुनै अर्थ हुँदैन ।
त्यसैले आउनुस्, हामी सच्चा अभिभावक बनौँ । हाम्रा बालबालिका हामी हुँदाहुँदै टुहुरा नबनून् । पैसा, मस्ती र आनन्दका नाममा तिनलाई अर्काको जिम्मा नलगाऔँ । बाबुआमा हुँदाहुँदै छोराछोरी टुहुराटुहुरी हुने क्रमलाई यथाशीघ्र रोकौँ । हामीसितै हुर्किऊन्, हाम्रा प्यारा छोराछोरी ! तिनले भनून्, मेरा बाबाआमाले मलाई साहै्र माया गर्नुहुन्छ, मलाई छोडेर कतै जानहुन्न । दुई–चार दिनमा त आइहाल्नुहुन्छ, ५–७ वर्ष होइन । उहाँहरुले पैसालाई भन्दा धेरै मलाई ध्यान दिनुहुन्छ ।’
चार वरिष्ठ कलाकार सम्मनित
कर तिरौँ, राज्यकोषको दोहन रोकौँ